Labo kamid ah Wasaaradaha Dowlada oon shaqeyn iyo Sababta ka dambeysa | Baydhabo Online
Labo kamid ah Wasaaradaha Dowlada oon shaqeyn iyo Sababta ka dambeysa
Waxaa wali bur bursan dhismaha xarunta Otto Otto oo ay degnaayeen Wasaaradaha Arimaha Gudaha iyo Amniga Xukuumada Soomaaliya, kadib weerar Al Shabaab ku qaadeen 7-dii bishii july ee sanadkan.
Dhismaha ay ku shaqeenayaan Wasaaradahan ayaa ku bur buray qarax ismiidaamin ah iyo weerar toos ah ay Al Shabaab ku qaadeen, mana jirto ilaa hada wax dib u dhis iyo dayactir muuqda oo lagu sameeyay xarumahaasi.
Inta badan Shaqaalaha labada Wasaaradood ayaa ku jira fasax aysan ogeyn xiliga ay kasoo laaban doonaan, waxaana labada Wasaaradood xafiisyada muhiimka ah ee shaqada aan looga maarmin kusii shaqeeyaan xarumo kale oo dowladu leedahay.
Sida aan xogta ku heleyno xafiisyada shaqada ka socoto ee Wasaarada Amniga Gudaha ayaa hada la geeyay xarunta Booliiska Soomaaliya, halka Wasiirka Amniga horeyba inta badan ugu dhax shaqeyn jiray xafiis ugu yaala gurigiisa.
Dowlada Soomaaliya ayaan inta badan horey ka dhisin xarumaha uga bur bura qaraxyada Muqdisho, halka goobaha ganacsi iyo Hoteelada ay waxyeelado kasoo gaaraan qaraxyada si deg deg ah loo dhiso.